Itovian'ny Kristiana evanjelika rehetra ny fanomezany lanja ny fiovam-po isam-batan'olona izay vokatry ny safidy manokan'ny tsirairay avy eo ny fiainana mivantana ny "fihaonana amin'i Kristy". Izany dia midika fa misy fiovam-piainana sy fihaonan'ny tsirairay amin'Andriamanitra izay mifanohy amin'ny famakiana ny Baiboly sy ny fiombonana vokatry ny vavaka isam-batan'olona na itambaran'ny be sy ny maro. Mampiavaka azy koa amin'ny protestantisma sy ny katolisisma ary ny ortodoksia ny batisan'ny mino (batisan'olon-dehibe). Ny Evanjelisma ankehitriny dia ahitana mpivavaka 285 000 000 maneran-tany (tsy voaisa ao ny Pentekotista), ka mahefeno ny 13%n'ny Kristiana eran-tany izany.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Evanjelisma&oldid=973017"
Voaova farany tamin'ny 10 Aogositra 2019 amin'ny 05:31 ity pejy ity.